အေးငြိမ်း – မြန်မာအိမ်အကူလုပ်သားများအတွက် သင်တန်း – ၅ (နိဂုံး) အခန်း (၅) – စိတ်ဖိစီးမှုများကို ကုစားခြင်း (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၈ စင်ကာပူသို့ ယခုမှ သင်ရောက်လာရခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် အရာအားလုံး အသစ်အဆန်း ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။  သင်မသိသေးသည်းအရာများ အများအပြား ရှိနေပါလိမ့်မည်။  သင်မသိသေးသည့် အရာများကို လေ့လာ သင်ယူပါ။  စင်ကာပူမှ ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးကို လေ့လာပါ။ သူတို့နှင့် အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။  သင့်အလုပ်ရှင်နှင့် သူ့မိသားစု၏ နေထိုင်မှုပုံစံကို လေ့လာပါ။ နားလည်အောင် ကြိုးစားပါ။  ဘာသာရေးအရ ရှောင်ကြဉ်သည်များရှိပါက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြထားပါ။ (ဥပမာ –...
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ ပျော်လို့ဝရင် မော့ကြည့်ပါ …
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ ပျော်လို့ဝရင် မော့ကြည့်ပါ … (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ရာဇာသာစည်
ကျော်ဆွေဝင်း (ရွှေအင်း) ● ငစီ မရှုံးဘူး (ဝတ္ထုတို) (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၁၈ သံဃာ့ဒါန ဆွမ်းလောင်းဓမ္မာရုံ။ ရန်ကုန်- မန္တလေး မော်တော်ကားလမ်းမကြီးဘေးတွင်ရှိပြီး မြို့ကလေး၏ အချက်အချာကျသော စည်ပင်သာယာဈေးနှင့် လည်းနီးသဖြင့် မြို့လယ်ခေါင်ဟု ဆိုနိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဤဆွမ်းလောင်းဓမ္မာရုံတွင် သံဃာ့ဒါနဆွမ်းလောင်းအသင်းမှ နေ့စဉ်မြို့ပေါ်ဘုန်းကြီးကျောင်း (၂၆) ကျောင်းရှိ သံဃာအပါး (၆၀၀) ကျော်တို့အား အရုဏ်ဆွမ်းလောင်းလှူပေးနေသဖြင့်ကုသိုလ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မုဒိတာပွားကြရလေရာ မြို့ဂုဏ်ကျက်သရေကိုဆောင်သည့်နေရာလေးဟုဆိုလျှင်လည်း မှား မည်မဟုတ်ပေ။ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့မှလွဲ၍ နေ့စဉ်နံနက်တိုင်း ဤဓမ္မာရုံလေးတွင် လူစည်ကားလေ့ရှိသည်။ သို့ရာတွင်ဆွမ်းလောင်းခြင်းကိစ္စကြောင့် လူစည်ကားနေခြင်းက မဟုတ်ပေ။ ဆွမ်းလောင်းလှူခြင်းကိစ္စမှာ နေ့စဉ်အရုဏ်တက်ချိန် မနက် လေးနာရီခွဲမှစတင်ပြီး နံနက် ၅ နာရီခွဲ ခြောက်နာရီခန့်အတွင်း ပြီးပြတ်သည်။ ဆွမ်းလောင်းပြီးချိန်တွင် အသင်းမှ ဝေယျာဝစ္စပြုလုပ်သူများ...
ဆောင်းယွန်းလ ● ရှာဖွေပျောက်ဆုံးမှုတစ်ခု (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၁၈ ပျင်းပျင်းရှိလာလို့ စကားပြောဖော်ရှာတော့ အခန်းထဲ စိမ်းစိုနေတဲ့ သစ်ပင်နှစ်ပင်ကိုတွေ့ တယ် သဘာဝမကျပေမဲ့ သစ်ပင်တွေပေါ်ကို စကားလုံးလှလှတွေ ခြွေချပစ်လိုက်တယ် ငြီးငွေ့မှုကို အကြောဆန့်ဖို့ တောအနှံ့ထွက်စရာ ကိုယ့်ဝန်းကျင်မှာ တောင်တွေလည်း မရှိပါဘူး လေညင်းခံဖို့အတွက် လေဟာပြင်ကိုထွက်တော့ အရွက်မရှိတဲ့သစ်ပင်တွေက မြင်ကွင်းကိုဆီးကြိုကြရင်း လေတိုက်နှုန်းအတိုင်း သူတို့ရဲ့အကိုင်းတွေနဲ့ ကပြကြတယ် သဘာဝက လှချင်တိုင်း လှလို့မရတဲ့ ညနေခင်းကိုပိုင်ထားပြီး ကိုယ်က သခါင်္ရတရားကို ကိုင်ထားခဲ့ရတယ် ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေ ပန်းလိုပွင့်ပြီး စိတ်ပြတင်းနဲ့ အခန်းတံခါးတွေကို အကျဉ်းထောင်လိုပိတ်ထားရတဲ့ ကမ္ဘာ့တစ်နေရာမှာ။ ဆောင်းယွန်းလ No tags for this post.
ကာတွန်း KZZH – ဆင်းပြီး ပြန်တက်သူနဲ့ တက်ပြီး ပြန်မဆင်းသူ
ကာတွန်း KZZH – ဆင်းပြီး ပြန်တက်သူနဲ့ တက်ပြီး ပြန်မဆင်းသူ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း - KZZH
မြတ်စံ – ” သင်္ကြန်အမြှောက်သံ ကျယ်လောင်ပါစေ “(သို့) မယုံရင် ပုံပြင်လို့သာ မှတ် “
မြတ်စံ – ” သင်္ကြန်အမြှောက်သံ ကျယ်လောင်ပါစေ “(သို့) မယုံရင် ပုံပြင်လို့သာ မှတ် ” (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၁၈ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၃၀ မတိုင်ခင် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်( မဆလ-တစ်ပါတီအာဏာရှင်ခေတ်) တုန်းက သင်္ကြန်သံချပ်အလှပြကားတွေနဲ့ စည်ကားစွာ လှည့်လည်သွားလာနေတဲ့မြင်ကွင်းလေးကို အမှတ်ရမိတယ်။ ညဖက်ဆို ရပ်ကွပ်အလိုက်ဆုပေးမဏ္ဍပ်တွေမှာ အလှပြကားယာဉ်တွေဟာကိုယ့် အဖွဲ့လိုက် သံချပ်တွေထိုး။မင်းသားနဲ့မင်းသမီးတွေရဲ့တပင်တိုင်အက၊ နှစ်ပါးသွားအက နဲ့အလှပြယာဉ်ကားကြီးကိုလည်း တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့နဲ့ အပြိုင်အဆိုင်ခြယ်သထားတဲ့ အဖွဲ့ရဲ့နာမည်နဲ့လျှော်ညီအောင် ပြင်ဆင်ထားကြပြီး သံချပ်၊ အက၊ အလှပြယာဉ်ကားပြင်ဆင်မှု စတာတွေကိုပေါင်းစုပြီး စွယ်စုံဆု ရဖို့ကြိုးစားတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်။ “ယဉ်ကျေးမောင်၊ မောင်မောင်တို့အဖွဲ့၊ မောင်မောင်ဆိုလေ ထီရိုးရှည်၊ အမေ့သား၊ ပြီးပါပြီ၊ ဆိတ်ပါးစပ် နတ်မျက်စိ “စတဲ့ အဖွဲ့များစွာရှိကြပြီး စွယ်စုံဆုရဖို့ ကြိုးစားတဲ့အဖွဲတွေလည်းရှိသလို...
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ – (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင်း (၆၇) (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၈ ● မူလအခြေခံဒေသများ ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးသော အရှေ့မြောက်စစ်ဒေသအပါ နယ်စပ်မှအခြေခံဒေသအများစုမှ ၁၉၆၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှ ပေါ်ထွက်လာ ခဲ့သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် CPB လက်နက်ကိုတိုက်ပွဲ စကထဲက ပြည်မတွင် အခြေခံစခန်းများစွာရှိခဲ့သော်လည်း ၁၉၇၇ ခုနှစ် နှစ်ကာလများတွင် ပဲခူးရိုးမတိုင်း၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တိုင်း၊ မသုံးလုံးဒေသ (မြင်းခြံ၊ မန္တလေး၊ မိတ္ထီလာ) နှင့်မြစ်ဖျားတိုင်းတို့ ကျဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ရှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်း၊ အနောက်မြောက်တိုင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဆိုသည့် အခြေ ခံဒေသဟောင်း ၄ ခုကတော့ ကျန်နေသေးသည်။ ●...
သင်္ကြန်အကျနေ့ မန္တလေးမြို့ လမ်းလျှောက်သင်္ကြန် မနက်ပိုင်း မြင်ကွင်းများ (သတင်းဓာတ်ပုံ – ချမ်းမြ) ။ မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၈ Tags: ချမ်းမြ
လင်းသက်ငြိမ် ● မပို့ဖြစ်တဲ့စာ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၈ သူတို့ရဲ့ချစ်မေတ္တာက သိပ်ကြွပ်ဆတ်လွန်းတာပဲ အမေရယ် ကျနော်နင်းထားမိတာ မုန့်လေပွေတစ်ချပ်များလား ဘဝဟာ ပျော်စရာကြီးလို့ သူတို့ပြောကြတယ် ကျနော့်အငေးတွေမှာ ပျော်စရာတွေပါလို့လား ဘဝဟာ ကြေကွဲစရာတွေချည်းပါပဲတဲ့ သူတို့ကိုလည်း ကျနော်ပြုံးမိပြန်တယ် အစွန်းတွေဟာ နေရာအနှံ့ အနက်ကြီးတွေ ကိုယ့်ဦးခေါင်းကို ဘယ်သူ့ဆီပုံအပ်လိုက်ရမလဲ နေပူလွန်းသော နေ့များ မိုးရွာလွန်းသော ညများ ပင်လယ်ကိုမမြင်ဖူးခဲ့တဲ့ ကျနော် လမ်းမကြီးစီးဆင်းနေပုံကို ငေးမော အလင်းတွေ လှိုင်းလိုလူးလို့ မြို့ကြီးဟာ ခိုစီးဖို့မဟုတ်ခဲ့ဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကာယဟာ ကိုယ့်ရဲ့မနက်စာ ညစာ ကိုယ့်အချိန်အကြောင်း ကိုယ်တွေးမိလေ ညပိုနက်လေပဲ အဆင်မပြေမှုတွေကို ကျနော်မဆောင်းပါရစေတော့နဲ့ ညညအမေ လန့်လန့်နိုးနေတာ အဝေးက ကျနော့်အိပ်မက်ဆိုးတွေကြောင့်လား အနာတွေကိုပြပြီးတောင်းနေတဲ့ သူတောင်းစားလို ကျနော့်ကဗျာတွေဟာ သိက္ခာမဲ့နေပြီလား...
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● ကျွန်တော်နှင့် အစိုးရဆိုသည်မှာ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၈ အစိုးရဆိုသည်မှာ ရွာသူရွာသား မြို့သူမြို့သား တိုင်းသူပြည်သား နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ကို အုပ်ချုပ်စိုးမိုးချယ်လှယ် ချုပ်ကိုင် စီမံခန့်ခွဲရုံသက်သက်ထားရှိသော အဖွဲ့အစည်းသက်သက်မဟုတ်ပါ။ ထိုရည်ရွယ်ချက်ရှိနေပါလျှင်လည်း မရှိသင့် မရှိအပ် မထားသင့် မထားအပ်တော့သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် တာဝန်ယူတော့မည်ဆိုလျှင် အဓိကပြုလုပ်ရမည်မှာ အများအကျိုးသာ ဖြစ်သင့်ပါသည် မဟုတ်ပါလား။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်သူများလုပ်ကိုင်နေသူများကိုလည်း လူကြီးဟု သုံးနှုန်းကြသဖြင့် အသက်ကြီး သောလူကြီးများကသာ နေရာယူကာ စီစဉ်လုပ်ကိုင်ရမည် စီမံခန့်ခွဲရမည်ဟု တစ်ထစ်ချ မသတ်မှတ်ကြစေလိုပါ။ လူကြီးဆို သည်မှာ တာဝန်ကြီးကြီးကိုယူထားသော ထမ်းဆောင်နေသောသူကိုသာ လူကြီးဟုခေါ်ဆိုသည်ကို လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြောကြားဖူးသည် မဟုတ်ပါလား။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်သူတို့၏ အရည် အချင်းများထဲတွင် အရေးအကြီးဆုံးမှာ...
မောင်အောင်မွန် ● လှသောပို၍လှသောနှင့် ခင်သန်းနု (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၅၊ ၂ဝ၁၈ (၁) ၁၉၅၉ ခု၊ မြန်မာ့အသံသို့ ကျွန်တော်မရောက်မီကတည်း စာရေးဆရာဖြစ်နေပါပြီ။ ဇာတ်လမ်းပမာ နားဆင်စရာ တာဝန်ခံ စန္ဒရားအောင်ခင်နှင့် မောင်အောင်မွန်၏ဝတ္ထုတိုများကလည်း လူချင်းမဆုံမီကပင် ရင်းနှီးနေနှင့်၏။ ကျွန်တော်ပထမဆုံး ရေးသော သိင်္ဂီရယ်မေ့ပါနိုင်ကိုတောင် ရှာတွေ့ပြီး ဇာတ်လမ်းလုပ်ကာ သူထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်ကိုသာ ကြည့်ကြပါ။ ၁၉၆၈ ခုတွင် မြန်မာပိုင်းသို့ ပြောင်းရသော်လည်း လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်တွေထဲ အသံလွှင့်ဇာတ်ရေးဖို့မပါ၊ စိတ်ကူးရ ကြိုးစားကြည့်ရင်း အောင်မြင်သွားသည်။ အသံလွှင့်ဇာတ်တွင် Narator မပါ၊ ဇာတ်ကောင်တို့ ပြောဆိုကြရင်း သရုပ်ဖော် ကြရ၏။ စာရေးဆရာ မင်းရှင်ထွက်သွားကတည်းက အသံလွှင့်ဇာတ်ညွှန်းကောင်းမရဟု ပင်တိုင် Producer ကို သစ္စာဆို၏။ အများ ဆုံးလာရောက် သရုပ်ဆောင်ပေးသူ...
ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းနေသူတွေ …
ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းနေသူတွေ … (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီပုချေ
မြတ်စံ – “တခုသော ထောင်သင်္ကြန်” (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၈ စိတ်အစဉ်ထဲမှာ မှတ်မိနေတဲ့ပုံရိပ်များစွာထဲမှ ဆယ်စုနှစ်ကျော်မျှ အချိန်ကာလအတွင်း ရပ်ဝန်းတစ်ခုထဲမှာ အတူတူနေထိုင်ခဲ့ဖူးသော ဆရာဦးဌေးလှိုင်@ဆရာဌေး @Htay Hlaing ရေးထားတဲ့ ထောင်သင်္ကြန် Postလေးကိုဖတ်မိရင်း…… ဖြတ်ကနဲ ဖြတ်ကနဲပြန်မှတ်မိနေတဲ့ ပုံရိပ်များမှာ အထူးတလည် ပြန်လည်စဉ်းစားစရာ မလိုတော့တဲ့ Recall ပုံရိပ်များပင်ဖြစ်တယ်…။ ဘာပဲပြောပြော ဒါမျိုးတွေကို ပြန်ဖတ်မိ ပြန်မြင်ယောင်မိရင် ငယ်ငယ်တုန်းက ရည်းစားဦးကို လွမ်းတာထက်တောင် ပိုသေးသဗျ…။ မယုံမရှိနဲ့ဗျ…ခေတ်ဆိုး ခေတ်ကျပ်ကာလကြီးထဲကမှ ဖိနှိပ်မှုအပေါင်းသရဖူဆောင်းထားတဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ နေထိုင်အသက်ရှင်ခဲ့ရတဲ့ အကျဉ်းသားအားလုံးဟာလည်း လူတွေပါပဲ။ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ လူသားဆန်ဆန် ကိုယ်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို လုပ်ယူနေထိုင်ခဲ့ရတာဟာလည်း သဘာဝကျတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ ဒုက္ခပင်လယ်ထဲ ကူးခတ်ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ အာဘောင်အာရင်းသန်သန် ပြောဆိုကြွေးကြော်ခဲ့သူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ သမုဒ္ဒရာကြီးကို...
ဦးတင်မိုး၊ မောင်စွမ်းရည် နဲ့ မာမာအေးတို့၏ အထိမ်းအမှတ်စာကြည့်တိုက်များ ဖွင့်
File Photo – Khin Maung Lay ဦးတင်မိုး၊ မောင်စွမ်းရည် နဲ့ မာမာအေးတို့၏ အထိမ်းအမှတ်စာကြည့်တိုက်များ ဖွင့် (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခ၏ နာယကကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ ဆရာ တင်မိုး၊ မောင်စွမ်းရည်နဲ့ ဂီတမိခင်ကြီး မာမာအေးတို့၏ အထိမ်းအမှတ်စာကြည့်တိုက်များ ယမန်နှစ်နဲ့ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း မောင်စွမ်းရည်က မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ ကဗျာဆရာကြီး (ဦး) တင်မိုး၏ စာကြည့်တိုက်ကို ဇာတိ ကန်မြဲရွာ၊ ကဗျာဆရာကြီး၊ ဝေဖန်ရေးဆရာကြီး မောင်စွမ်းရည်၏ စာကြည့်တိုက်ကို ဇာတိ ကန်ဆင့်(တောင်)ရွာ၊ ဂီတမိခင်ကြီး ဒေါ်မာမာအေး၏ အမေ့အိမ်စာကြည့်တိုက်ကို အမေရိကန်ပြည်၊ အင်ဒီယာနာ၊ ဖို့ဝိန်းမြို့မှာ အသီးသီး ဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒေါ်မာမာအေးက ဦးတင်မိုးနဲ့ မောင်စွမ်းရည်စာကြည့်တိုက်အသီးသီးအတွက် ကျပ်ငွေ...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ ● ပိတောက်တွေ ရွှေရည်လူး ဖူးကြပြီလေ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၈ နှင်းပွင့်တွေက မြေပြင်ပေါ်ကို အရှိန်ပြင်းပြင်း ပြေးဆင်းလာကြတယ်…။ လေအဝှေ့မှာ အအေးဓာတ်က အရိုးထိအောင် ထိုးထဲ့လိုက်သလိုမျိုး ခြောက်သွေ့နေတဲ့ မြေပြင်ကတော့ ငိုပွဲဆင်နေလေရဲ့….။ ငါရောက်နေတဲ့ အရပ်ကနေ အလွမ်းတွေ ကိုင်းကူးဆက် ဖူးပွင့်လာတဲ့ဝေဒနာ ပိတောက်ဝါ ပိတောက်ဝါ တို့ရေ တို့မြေမှာ အတာရေလောင်း ချမ်းမြေ့စေကြောင်း ဆုတောင်းပြီ …။ နှစ်ကာလများ သတိရတမ်းတမိပေါ့ ဒီမှာတော့ ဆောင်းအကုန် နွေအကြိုညမျှားမှာ ငါ့ … ပြူတင်းမှမြင်ရတဲ့ လမင်း ပိတောက်ဝါအရောင်နဲ့ထိန်ထိန်တောက်လို့…… ဒိနေ့ တနေ့လုံး ငါ … အထီးကျန် အဖေါ်မဲ့ ရေခဲဖုံးမြေအပေါ်မှာ...
သားကြီးမောင်ဇေယျ – မိုးကုတ် နှစ် ၈၀၀ အသံများ (DVB Online မှ) မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မန္တလေး-မတ္တရာ-မိုးကုတ်လမ်း ဒီလမ်းကပဲ မိုးကုတ်နှစ် ၈၀၀ ပြည့်ပွဲကို သွားဖို့ ကျနော်တို့ ဒီဗွီဘီအဖွဲ့သားတွေ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်-မိုးကုတ်လမ်းက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ အစိုးရစစ်တပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုနဲ့ပါ။ တကယ်တော့ ကျနော်တို့ရွေးတဲ့လမ်းဟာ အကွေ့အကောက်များပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်က ကျနော် ဒီလမ်းကို အကြိမ်ကြိမ် ဖြတ်သန်းခဲ့ရသူပါ။ အမှောင်အိပ်မက်ရှည်ကြီးကို ဖြတ်သန်းရသလို ဒီလမ်းကို ဖြတ်သန်းခဲ့တာပါ။ လမ်းတွေက တဆစ်ချိုးကွေ့ များသလို ဒီလမ်းပေါ်က ခရီးသည်တွေရဲ့ ဘဝဟာလည်း တဆစ်ချိုးကွေ့တွေ များလှပါတယ်။ ဒီလမ်းဟာ အကွေ့အကောက်တွေများသလို ဒီလမ်းကို...
အေးငြိမ်း – မြန်မာအိမ်အကူလုပ်သားများအတွက် သင်တန်း – ၄ အခန်း (၄) – အခြားနယ်ပယ်များတွင် အန္တရာယ်ကင်းရေး (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၈ နေအိမ်တွင်း အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ၁။ ချက်ပြုတ်နေစဉ် ဖုန်းလာပါက မီးပိတ်ပြီးမှ ဖုံးပြောပါ။ ၂။ ကလေးငယ်များအား ပြုစုနေစဉ်၊ လူကြီးသူမများအား စောင့်ရှောက်နေစဉ် ဖုံးမသုံးပါနှင့်။ မီးအန္တရာယ်ကင်းဝေးရေး ၁။ ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်နေစဉ်၊ မီးပူတိုက်နေစဉ် တခြားမသွားပါနှင့်။ ၂။ မီးလောင်နိုင်သည့် စက္ကူ၊ အဝတ်စသည်တို့ကို မီးဖိုအနီး မထားပါနှင့်။ ၃။ မီးပူတိုက်နေစဉ် ဖုန်းလာပါက မီးပူခလုတ်ကိုပိတ်၊ မီးပူထောင်ရမည့် သံစင်ပေါ်တွင် ထောင်ထားခဲ့ပါ။ ၄။ အပြင်ထွက်တော့မည်ဆိုပါက လျှပ်စစ်သုံးပစ္စည်းများကို ပိတ်ခဲ့ပါ။ ၅။ ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ပြီးသည့်အခါ ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုခလုတ်ကို ကောင်းစွာပိတ်ခဲ့ပါ။...
ကာတွန်း ဘဌေးကြည်ရဲ့ သဂျီးဖြစ်ပြီး သဂျိုးကြီးနဲ့ မကြိုစေလို …
ကာတွန်း ဘဌေးကြည်ရဲ့ သဂျီးဖြစ်ပြီး သဂျိုးကြီးနဲ့ မကြိုစေလို … (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ဘဌေးကြည်
မင်းကိုနိုင် ● ပုံမပြောချင်ဘူး (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၈ ကိုမင်းကိုနိုင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။ မီးမောင်းတွေက အပ်ပျောက်ပင်ရှာနိုင်သည့် အလင်းအားနှင့်၊ အသံစနစ်ကလည်း အသက်ရှူသံပင် ကျယ်ကျယ် ကြားသည့် စက်တွေနှင့်၊ ပရိသတ်ကလည်း ကွင်းလုံး ပြည့်ခဲလို့။ ဒီလိုမဏ္ဍပ်မျိုးက သံချပ် အသင်းကားတွေအကြိုက်။ ကျ နော်တို့အသင်း ဒီမဏ္ဍပ်ကို ဝင် ရမှာ တာစူနေသည့် ပြိုင်မြင်းများ နှယ်။ သင်္ကြန်ဒိုးသံ တုံချပ်ချပ်နှင့်အတူ စင်ပေါ်ရောက်ကတည်းက အရာရာကွက်တိ။ ခေတ်နှင့်စနစ် အကြောင်း၊ လူတေ အကြောင်း ဟာသသံချပ် သောင်းပြောင်းမွှေ လိုက်သည်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ တော့မဟုတ်။ မဆလခေါ် တပါတီ အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ သံချပ်ထိုး သရုပ်ဖော်ရတာ တ...
မိုနေးသစ် ● တော (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၈ ကားမီး​ရောင်​​ကြောင့်​ မျက်​လုံး​တွေ ခဏတာ ပြာ​ဝေသွားခဲ့တယ်​။ အ​ဝေးညရှုခင်း​တွေကို​ ငေး​နေမိ​နေချိန်​ အ​ဝေး​ပြေးကား လမ်းမဖက်​က ကားတစ်​စီး​မောင်းနှင်​လာတာ​ကြောင့်​ အ​တွေးများပြတ်​​တောက်​သွားခဲ့ပါတယ်​။ ကိုယ့်​​မွေးရပ်​​မြေကိုပြန်​လာရ တယ်​ဆို​တော့ ရင်​ထဲမှာလှပ်​ကနဲဖြစ်​ပြီး အတိတ်​ကိုပြန်​လည်​​တွေးမိကာ ရင်​ခုန်​​နေခြင်းလည်း ဖြစ်​ပါတယ်​။​ ကွေ့​ကောက်​​နေတဲ့ အတက်​အဆင်းများတဲ့ တာလမ်းမဖက်​ကို က​လေးဘဝ ညည​တွေမှာ ဝရန်​တာဖက်​ထွက်​ရင်း ​စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။​​ နေ့ရော ညပါ အီဇူးဇူးကား အဝါကြီး​တွေက သစ်​လုံး​တွေသယ်​​ဆောင်​​နေတဲ့အချိန်​လည်း ​ဖြစ်​ပါတယ်​။ ရွာအ​နောက်​ဖက်​ကပ်​ရက်​မှာ ​တောအုပ်​​တွေရှိခဲ့ပါတယ်​။ ကျွန်းပင်​​တွေ လက်​ညှိုး ထိုးမလွဲရှိနေပါတယ်​။ အများအားဖြင့်​ သက်​တမ်းရင့့်​အပင်​ကြီး​တွေဖြစ်​ပါတယ်​။​သစ်​​တောကြိုးဝိုင်း​တွေထဲက​နေ သက်​တမ်းရင့်​ကျွန်းပင်​အကြီးကြီး​တွေကို သယ်​​ဆောင်​​နေခြင်းလည်းဖြစ်​ပါတယ်​။ တန်​ဖိုးရှိလှတဲ့သစ်​​တော​တွေ ကျ​နော်​တို့ရွာက​လေးရဲ့အ​နောက်​ဖက်​မှာတည်​ရှိခဲ့ပါတယ်​။ ငယ်​ငယ်​က အ​မေနဲ့​တောထဲထင်း ခုတ်​ထင်း​ခွေခဏခဏလိုက်​ဖူး​တော့ သစ်​ပင်​ကြီးကြီးမားမား​တွေနဲ့ စုံလင်​လှတဲ့​တောအုပ်​ကြီး​တွေရှိခဲ့တယ်​ဆိုတာ သိခဲ့ရပါ တယ်​။...
ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ စံချိန်သစ်တင်လိုသူတွေ ….
ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ စံချိန်သစ်တင်လိုသူတွေ …. (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ကိုတေ
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ (Head Winds & Tail Winds) (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၈ No tags for this post.
မောင်မိုးသူ – မြူမှောင်ဝေကင်း ငွေအဆင်း စန္ဒ ပြည်ထောင်တိုင်းမြန်ပြည် ငြိမ်းချမ်းအောင် ဆု … (ကုမုဒြာအွန်လိုင်း၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၈ စံ-မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းစဉ် လာအရ မြန်မာနှစ်သစ်ကူးအခါသမယတွင် နှစ်ဟောင်းက အညစ်အကြေးများကို အတာရေနဲ့ ဆေးကြော၍ နှစ်သစ်၊ ခေတ် သစ်ကို ကြိုဆိုကြရတဲ့ အစဉ်အလာ ဖြစ်ပါ တယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ အစဉ်အလာအရ သင်္ကြန် အခါသမယမှာ သက်ကြီးဝါကြီး လူကြီး မိဘများကို ရေကန်တော့တဲ့ အစဉ်အလာ ရှိပါတယ်။ မန္တလေးသားဖြစ်တဲ့ မောင်မိုးသူ လည်းပဲ မန္တလေးမှာ နေထိုင်စဉ်ကာလက သင်္ကြန်အခါသမယမှာ သက်ကြီးဝါကြီး ဆရာသမားများကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရေ ကန်တော့ သွားရလေ့ ရှိပါတယ်။...
ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်) – သင်္ကြန် ကာလ ပိတ်ရက် အိမ်မပြန်နိုင်သူများလည်းရှိ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၈ (ရန်ကုန် ဧပြီ ၁၂) ယခုနှစ် သင်္ကြန်ကာလတွင် ရုံးပိတ်ရက်ကာလမှာ ငါးရက်တည်းသာ ဖြစ်သည့်အတွက် ခရီးဝေး လွန်းသူများ ပြန်မည့်သူမရှိသဖြင့် ယခုနှစ် မဟာအတာသင်္ကြန်တွင် ကားစီးသူ ယခင်နှစ်တွေလောက် ကျပ်သိပ်ခြင်း မရှိကြောင်း အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းတစီးမှ ယာဉ်နောက်လိုက် တစ်ဦးမှ ပြောပြခဲ့သည်။ “ဟုတ်တယ်ဗျ ၊ ဒီနှစ်က အရင်နှစ်တွေ လောက် နယ်ဝေးသမားတွေက မပြန်နိုင်တော့ဘူးလေ။ ပိတ်ရက်က နည်းတော့ လမ်းမှာတင် အချိန်ကုန်ပြီး ခရီးပန်းတာပဲ အဖတ်တင်မယ်လေ။ ကျနော်ဆို ဒီနှစ်မပြန်ဘူး၊ ၁၈ မိုင် ၃ ဖာလုံမှာ ရှိတဲ့ ဖားအောက်တောရမှာ တရားသွားဝင်မယ်ဆိုပြီး...
မြတ်စံ – ” ပြန်လည်ခံစားမိသော… ကြိုးမဲ့ချည်တိုင်” (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၈ မိမိရဲ့ဘဝထဲသို့ဝင်ရောက်လာတဲ့” သမီးလေးဖူးဖူး ” ရဲ့ရယ်သံများနဲ့အတူ………အမေ။အကို။ညီ ညီမများနဲ့ မိသားစုဘဝစိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းများနဲ့အတူ… ဒီနေ့မနက်မှာ ပြန်လည်နားထောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ခင်မောင်တိုးသီဆိုထားတဲ့ ” ကြိုးမဲ့ချည်တိုင် ” သီချင်းကို စိတ်ထဲမှာ ပြန်လည်ရေရွတ်မိရင်း……… တေးရေး-အဉ္စလီမောင်မောင် ရဲ့စာသားနဲ့အတွေးအားကောင်းခြင်း… ကိုခင်မောင်တိုး ၏သီဆိုမှု ဂရုဏာသံတို့ကို အဖန်ဖန် အထပ်ထပ်ခံစားနေမိခဲ့… ရာစုနှစ်ဝက်ကြာမျှ နေထိုင်ခဲ့ရချိန်ကသောအချိန် ကာလများမှာ ကျနော့်ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝအတိုင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် အနှောင်အဖွဲ့ကင်းစွာနေထိုင်ခဲ့…ကိုယ်ဝါသနာပါရာ ကိုယ်ယုံကြည်ရာအလုပ်တွေကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ကိုင်ခဲ့… … … … အချုပ်အနှောင်များနဲ့ နှစ်ကာလကြာရှည်စွာ ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ရချိန်များမှာပင် ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပန်းတိုင်အတွက် မယိမ်းယိုင်ခဲ့…။ မိဘ ညီအကိုမောင်နှမကို တွယ်တာစိတ် သံယောဇဉ်ချစ်စိတ်ရှိခဲ့ပေမဲ့…အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နှစ်ကာလကြာရှည်စွာ...
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅ – ၁၉၈၀) – အပိုင်း (၆၆) (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၈ ● တပ်မဟာ ၇၆၈ နှင့် ရှမ်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်များ CPB တပ်မဟာ ၇၆၈ သည် CPB ပါတီဗဟိုမှ တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်သည့် သီးခြားတပ်မဟာ ၁ ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့် စစ်ဒေသတွင်မှ ပါဝင်ခြင်းမရှိပေ။ တပ်မဟာ ၇၆၈ သည် အရှေ့မြောက်စစ်ဒေသနှင့် ၈၁၅ စစ်ဒေသကြားရှိ မိုင်းယန်းမြို့ နယ်အား အခြေပြုလှုပ်ရှားသည့် တပ်မဟာဖြစ်သည်။ ၇၆၈ တပ်မဟာသည် မူလက ရှမ်းအမျိုးသားတပ်မတော်အမည်ဖြင့် သီးခြားရပ်တည်ခဲ့သော ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တခုဖြစ်ပြီး ၁၉၇၆ ခုနှစ်၈ လပိုင်း (သြဂုတ်လ) တွင် CPB...
ကာတွန်းကိုခေတ်ရဲ့ ရင်ကြားစေ့မှုနဲ့ ငြိနေလို့ပါဗျာ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်းကိုခေတ်
မောင်စွမ်းရည် ● သားဂျာနယ်ကျော်မိုးဟိန်း (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၂၊ ၂၁ဝ၈ ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေးတို့က မွေးတဲ့သားအငယ်ရဲ့နာမည်က မိုးဟိန်းတဲ့။ မိုးဟိန်းဆိုတဲ့ နာမည် က သူ့မိဘတွေပေးတဲ့ နာမည်ပါ။ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးဆိုသူတာ ဗေဒင်ကိန်းခန်းတွေ ဝါသနာပါသူဖြစ်တော့ သူ့သားကို ဗေဒင်နက္ခတ်တွေနဲ့အညီ တွက်ချက်ပြီး နာမည်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်လည်း ရှိသတဲ့။ သူ့အစ်ကိုကို ကျွန်တော်မမြင်ဘူးပါ။ ပေတယ်၊ တေတယ်ဆိုပြီး ဂျာနယ်လောကမှာ နာမည်ကြီးပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဦးလေးအရင်း ကဲ့သို့ လေးစားချစ်ခင်သူကတော့ ဗန်းမော်တင်အောင်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ဆရာတင်အောင်လည်း ထိန်းလို့မနိုင်ခဲ့ပါ။ ပေပေ တေတေနဲ့ပဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆုံးပါးသွားရှာတယ်။ ညီဖြစ်သူကတော့ အစ်ကိုနဲ့ ပြောင်းပြန်ပါပဲ။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး အသောက်အစားလည်းကင်းသူ သားလိမ္မာလေးလို့ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ရန်ကုန်ပြောင်းလာတော့ အလုပ်လုပ်ရတာက...
ခိုင်ကြည်သစ် ● ရွှေကြာ ဘာပြောသွားသလဲ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၈ (၁) သည်ရက်ပိုင်းထဲ မြန်မာရုပ်ရှင်တွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို ကြည့်ဖြစ်နေသည်။ နောက်ဆုံးကြည့်ဖြစ်သည်က “ရွှေကြာ”။ ရုပ်ရှင်ပညာနှင့်ပတ်သက်၍ ဝလုံးကလေးပင် ဝိုင်းအောင် မရေးနိုင်သေးသဖြင့် ရုပ်ရှင်ဝေဖန် ရေးတွေ မလုပ်လို။ လုပ်လည်း မလုပ်သင့်ဟု ထင်သည်။ သို့သော် ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ အနုသုခုမမှန်သမျှ လူသားတို့နှင့်ဆိုင်၍ပေလားမသိ။ အနုပညာပစ္စည်း တစ်ခုခုကို ကောက်ကိုင်လိုက်လျှင် ရင်ဘတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုဖြစ်လာတတ်သည်။ ဦးနှောက်ထဲ အတွေးတွေ ဆက်တိုက်ပေါ် လာတတ်သည်။ သည်လို ခံစားမိ၊ တွေးတောမိတာတွေကိုလည်း လူသားတို့သဘာဝ ပြန်ပြောပြချင်မိသည်။ သည်လိုနှင့် ရွှေကြာ ဇာတ်ကားက ပေးသော ဝေဒနာနှင့်ဆန့်ပွားမိသော အတွေးတို့ကို စာဖတ်သူအား မျှဝေဖို့ ဖြစ်လာပါတော့သည်။ ကျွန်တော်...
ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ အတိုးနည်းအိမ်ယာမဟုတ်ရပါ
ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ အတိုးနည်းအိမ်ယာမဟုတ်ရပါ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီပုချေ
Page2of 890«12345...890»
သင်းလဲ့ဝင်း /နေပြည်တော် (Myanmar Now) - NLD က ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြင်ဆင်ထားပုံမရဘူး၊ လူကြိုက်ကတော့ များနေတုန်းပဲ
>Watercress by Ei Kyar Kway
>Than Soe Hlaing - Nargis Reporter Story 6
>Min Ko Naign first greet speech to public after release from prison